Ukuhanjiswa simahla xa kuthelekiswa nesaphulelo | Martech Zone
Andiqinisekanga ukuba ungalinganisa ezi ndlela zimbini zokutsala abathengi. Kubonakala kum ukuba isaphulelo yeyona ndlela yokufumana umntu kwindawo yakho ye-ecommerce, kodwa ukuhanjiswa simahla kunokuba yindlela yokwandisa amaxabiso okuguqula. Ndikwanomdla wokwazi ukuba abathengi abathembekileyo bathengisa njani. Ukuba uyehlisa isaphulelo, ngaba abanye abantu bayabuya kwaye bathenge ngaphandle kwesaphulelo? Ukuba unikezela ngenqanawe yasimahla, ayisiyiyo inqaku lesiza sakho esiya kulindelwa ngumntu wonke kwaye asisebenzise ngaphezulu nangaphezulu?
Omnye wemiceli mngeni emikhulu abathengisi be-Intanethi bajongene nayo ukusukela ngomhla wokuqala kukuchasana nemirhumo yokuthumela. Ukwenza ivenkile kwiwebhu ngakumbi njengokuthenga emntwini, abanye abathengisi baqala ukubonelela ngokuhambisa simahla ngeodolo kwi-Intanethi. Ngaba ukuhanjiswa simahla kuyabakhuthaza ngokwenene abatyeleli bewebhusayithi ukuba bathenge ngaphezulu? Isuka e Monate I-infographic.
tags: isaphuleloukuhanjiselwa ngenqanawe mahalakuthengwa kwi intanethiUkuhambisa ngenqanawe
Ukucwangciswa: Ukudityaniswa kokuchongwa kwe-SaaS